Sein Lyan - စိ န် လျှံ: (၁၄) ဒီဇင်ဘာဆုတောင်း နှင့် မနော်ဟရီ အတု
Writer Sein Lyan Time 5:38 am
စစ်မှန်သောနေရာတွေမှာတော့ စစ်မှန်သော သူတစ်ယောက်ကို တွေ့တန်ကောင်းပါရဲ့ ...
အားလုံးကို မထိုက်တန်သည့်တိုင် ထိုက်တန်စွာ ပြန်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်
ငိုခဲ့ ။ ရယ်ခဲ့ ။ လွမ်းမောခဲ့ ။
ဒီလိုနေ့တွေ အရေးတကြီး လိုအပ်တယ်။ ။
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော မနော်က တို့နဲ့စကားပြောကြ
ရင် ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ... ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချစ်စရာကောင်းတယ်..
မကြီးတို့ ၂ယောက်တွေ့ကြရင် ကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွား
ရယ်တာကိုက ခစ် တဲ့. ဟဟ
တနေ့က မွေးနေ့အကြိုဆုတောင်းပေးထားပြီနော်.. အဲ့အတိုင်းပါပဲ။း))
မနက်ဖြန်မှာကျရောက်မဲ့ မနော် ရဲ့မွေးနေ့မှသည်
အတုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
မနော်ဟရီက မနော်ဟရီ ပါပဲမကြီးရေ။
လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်မှန်တယ်လို့ ထင်ရင်း
ဆက်သာလုပ် ရီနိုကတော့ အားပေးတယ်.....
ခုကျနော်တို့ သိနေတဲ့ မကြီးနော် အတုဆိုရင်လည်း
မကြီးနော်ပါပဲ အစစ်ဆိုရင်လည်း မကြီးနော်ပါပဲ။
မနက်ဖြန်မှာ ကျရောက်မဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောက်လာမဲ့လာမဲ့ နှစ်တွေ နှစ်တွေတိုင်းလည်း
သူတိုတွေ ထင်နေကျတဲ့ စတိုင်လေး (လူမှုဆက်ဆံရေးညံ့တယ်၊ဘယ်ကလာ…စွာတာ..စွာတာ...အူတူတူနဲ့ပါ..ခေါင်းမာတယ်..လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်..တဇွတ်ထိုး..ကျေးဇူးမသိ
တတ်ဘူး…သိချင်တဲ့နေရာကျသိပြီး..မသိချင်ရင်လည်းတုံးနေပြန်ရော…ဟုတ်တယ်..သူက..တဇွတ်ထိုး..တဇောက်ကန်း..ပေတယ်..အင်း… မကြီးနော်လား… သူလား… သူက ခေါင်းမာတယ်လေ… မဟုတ်တာပြောရင် ချက်ခြင်းတုံ့ပြန်တာပဲ… လူမုန်းဆေးကလဲ ကျဲလိုက်တာ လွန်ပါရော… မျက်နှာကလဲ မာသေးတယ်… အနုပညာ ကိုတော့ မထိနဲ့… သူဖန်တီးနေတဲ့ အနုပညာ မာနက တစ်ပြားမှ မချဘူး...အမေလား… အမေအစစ် ရေးတဲ့ကဗျာတွေက လူလိုပဲမာတယ်… အသုံးအနှုန်းတွေကသာ နုနေတာ… လူတွေနားမလည်အောင် ရေးတယ်ပေါ့… မနော်ဟရီ တွေကို ကဗျာတစ်ပုဒ်ချရေးခိုင်းရင်ကောင်းမယ်… အစစ်ဆိုရင် ကဗျာက မာမယ်… ထင်တာပဲ… သိချင် သူ့ သွားမေးမှပဲရမယ်..သူ့ကို အာဖရိက ကလူရိုင်းမျိုးနွယ်စုတစ်စုက ..လူဝါနတ်ဘုရားမအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြ
တယ်။) အတိုင်းနေရင်းပဲ နောက်နှစ်တွေမှာလဲမပြောင်းလဲသော သဘောတရားအတိုင်းထိုက်တန်တာပဲပြန်ပေးသင့်တဲ့ လောကအလယ်မှာ
အားလုံးကို မထိုက်တန်သည့်တိုင် ထိုက်တန်စွာ ပြန်ပေးနိုင်ပါစေ ...မကြီးရေ
တို့လဲ အဲဒီဝတ္ထုကို ကြိုက်တယ်။ ဖိုးစိန်ပြောတာ ဟုတ်ပါ့။ အတုဖြစ်ဖြစ် အစစ်ဖြစ်ဖြစ် အခု လက်ရှိ ခင်မိတဲ့ မနော်ကိုပဲ တသက်လုံး ခင်သွားမှာ..။
တနလာင်္နေ့မှာ ကျရောက်မဲ့ မနော်မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဘ၀ကို သား ကိုကို နဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
ဘ၀နဲ့ ဆန္ဒလဲ တထပ်တည်းကျပါစေ မနော်ရေ..
မကြီးနော် မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေး))
မေ က သံယောဇဉ်ကြီးတတ်တာကိုး ...
မေ က ဆူးတွေရှိချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ... ရေခဲနှင်းစက်လေးပဲဖြစ်တယ် ..
မေ က ဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ဝဲလက်က ၀ှက်ဖဲလေးလည်းဖြစ်တယ် ...
မေ က သူ့ခေါ်သံသူမကြားတဲ့ ... ဗန်ဂိုးရဲ့ နားရွက်တစ်ဖက်ဖြစ်တယ် ...
ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ အပဲ့စလေးလို .. လူတွေကြားမှာ
အံမ၀င်လှတဲ့ .. ထောင့်ချုပ်ကျောက်လေးလဲဖြစ်သေးတယ်...
သိပ်ချစ်တာတွေကို သိမ်းဆည်းထားဖို့ မအောင်မမြင် ကြိုးစားနေတဲ့ ဇွဲကောင်းတဲ့ အရှုံးသမားလေးလဲဖြစ်တယ် ..
ပဲ့ကျနေတဲ့ နှလုံးသားတွေကို ခဲရာခဲဆစ်တပ်ဆင်နေတဲ့ ... ကလေးဆန်တဲ့ပန်းပွင့်ဖူးလေးဖြစ်တယ်
မာရ်နတ်ရဲ့ဝတ်ရုံတွေကြားမှာမှ ရှင်ပြန်တမြောက်ခြင်းကို ပျိုးကြဲကြည့်နေတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ ဥယျာဉ်မှုးလည်းဖြစ်သေးတယ် ..
တောင်းဆိုးပုလုံးဆိုးလို ကံတရားကို .. ပစ်ကြည့်ဖို့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကြိုးစားနေသူကြီးပေါ့ ..
သူကိုယ်သူပြန်ရယ်ပြဖို့ မတတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်လိုပဲ သူမဟာ
ရာသီဥတုသာယာတဲ့နေ့မှာမှ ဖျားနာခဲ့လေရဲ့ ..
ပုံပြင်တွေမှာ ဇာတ်ပေါင်းခန်းရှိရဲ့လား ..
ကံတရားဟာ နသယ်နီယယ်ရဲ့ ဆရာပဲလားလို့ တွေးမိတယ် ...
မြင်နေသမျှဟာ မှားနေတယ် ...
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ... ရီနေးဆန်းတွေ အပွင့်များစွာပွင့်လန်းနေတယ် ...
ရင့်ကျက်မှုဆိုတဲ့ မေမလိုချင်တဲ့ တန်ရာတန်ကြေးမှာ ..
မေ ဒူးထောက်ကျသွားတယ် ...
ရိုးရိုးလေး ပျော်ရွှင်ပြုံးမြခဲ့တဲ့ နေ့လှလှတွေကို လွမ်းတယ် ..
ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတိုင်း . ဆုံနေအောင် .. သံသရာကို ... အ၀ိုင်းလုပ်ထားဖို့လည်းတွေးနေမိတယ် ..
တနင်္ဂနွေမှာ နားနေတော်မူတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အပြုံးကို မေ လူတွေဆီမှာ တပ်ဆင်ကြည့်တယ် ..
အင်း ..တစ်ခုမှ အဆင်မပြေပါလားလို့ စိတ်ရှုပ်သွားတဲ့ ကလေးလေးလို သူ့ခြေထောက်ကို သူရပ်ငေးနေတယ်
ပုံပြင်တွေဟာ သံသရာလိုပါပဲလားလို့ ...
မေ က အဆုံးသတ်လိုက်တယ် .... ။ ။
ကိုဇက်ရဲ့ အမေ( မမ မနော်ဟရီ) ဖွဲ့လေးဟာ လှပထိရှလွန်းလို့ ကူးယူဖော်ပြမိပါတယ်။
မယ့်အတွက် မနော်ဟရီအစစ်က ပြည့်ဝလွန်းတဲ့ စပါးနှံ။ ကြင်နာတတ်တဲ့ ကမ်းလင့်လက်။ နားလည်တတ်တဲ့ စာနာမျက်ဝန်း။
Zun Moe Sett said...
A very happy birthday to Ma Gyi Naw!
Wish you all the best & every success.
14 December 2009 at 04:29
14 December 2009 at 11:30